Ma Sidanoo Dhan Ayuu U Doonayaa!! - Lautaro Martinez Oo Inter Milan U Sheegay Hadal Farxad U Ah Barcelona & Laba Kooxood Oo Uu Ka Nixiyay - Gool24.Net
Ma Sidanoo Dhan Ayuu U Doonayaa!! – Lautaro Martinez Oo Inter Milan U Sheegay Hadal Farxad U Ah Barcelona & Laba Kooxood Oo Uu Ka Nixiyay
Weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa qaaday talaabo kale oo uu farxad ku geliyay kooxda aadka u doonaysa inay la saxeexato suuqa soo socda ee Barcelona xilli uu ka nixiyay kooxo ay ugu horreeyaan Paris Saint-Germain iyo Manchester City.
Lautaro ayaa la sheegay inaysan jirin wax ka eryaya Inter Milan isla markaana uu ku faraxsan yahay kooxdaas balse suurogalnimada uu Lionel Messi oo ay Argentina kasoo wada jeedaan kula midoobayo ayuu u arkaa arrin wanaagsan.
Sida uu sheegayo wargeyska Mundo Deportivo, kooxda ree Catalonia ayaa ah mida ugu cad cad ee ku guuleysan karta saxeexa Martinez iyadoo go’aanka uu haatan kaga sii farxiyay uu yahay inuu u sheegay Inter inay kaliya dhegaystaan dalabaadka uga imanaya Barca.
Iyadoo uu warkani yahay mid ka farxinaya Barcelona, labada kooxood ayaa marka hore u baahan doona inay isku fahmaan lacagta 97-ka Milyan ee Pound ah ee ku xidhan qandaraaska 22 sano jirkan ee Nerazurri.
Dhawaan ayay ahayd markii la sheegay inay labada kooxood heshiis qarka u saaran yihiin, si kastaba, kooxda difaacanaysa horyaalka Spain ayaa isku diyaarinaysa inay isku fahmaan Inter heshiis ay Lautaro ciyaartoy kaga bedelanayso.
Xiddigaha loo adeegsan karo heshiiskan ayuu ugu horreeyaa Arturo Vidal oo mudo dheer bar-tilmaameed usoo ahaa Inter si lamid ah Nelson Semedo, Antoine Greizmann iyo Emerson oo amaah ku jooga Real Betis.
Lautaro ayaa xilli ciyaareedkan 16 gool kusoo dhaliyay 31 kulan oo uu tartamada oo dhan kasoo ciyaaray isaga oo bandhig gaar ah oo wacan kusoo sameeyay Champions League halkaas oo uu shan gool kusoo diiwaan gashaday lix kulan oo uu ciyaaray.
Ugu dambayn, Barcelona ayaa Martinez u aragta bedelka mudada dheer ee weeraryahan Luis Suarez kaas oo haatan bar-tilmaameed u ah kooxaha horyaalka Maraykanka ee MLS-ka haddii uu go’aansado inuu baxo,